March 20, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
မိန်းကလေးတွေမှာ လူသိမခံချင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေရှိသလို ယောက်ျားလေးတွေမှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထုတ်မပြောချင်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ယောက်ျားသားတွေရဲ့သဘာဝ မိန်းကလေးတွေရဲ့အမြင်မှာ သူတို့အားလုံးအဆင်ပြေတယ် ၊ ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ် ၊ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်နိုင်တယ်လို့ မြင်စေချင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာ သူတို့အတွက် အဆင်မပြေတာလေးတွေ ၊ခက်ခဲနေတာလေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေကို မိန်းမသားများကလည်း သိထားတော့ သူတို့ကိုနားလည်ပေးလို့ရတာပေါ့။ သူတို့ထုတ်မပြောချင်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်တွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ?..
ကြော့ရှင်းလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကို မိန်းကလေးတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ချင်သလို ယောက်ျားလေးတွေလည်း
ပိုင်ဆိုင်ချင်တာပေါ့နော်။ ခပ်တောင့်တောင့် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ယောက်ျားလေးတွေမြင်ရင် ပေါ်တင်တော့မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ ရင်ထဲမှာ ငါလည်းဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အားကျစိတ်လေးတွေ တွယ်ငြိသွားတတ်ပါတယ်။ Gym မသွားဖြစ်ရင်တောင် Google ကနေ ယောက်ျားသားများအတွက် အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လိုက်ရှာနေတတ်ကြပါတယ်။
ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကိုယ့်ချစ်သူရှေ့မှာ ပိုက်ဆံမရှိကြောင်း ထုတ်မပြောပြချင်ဘူး။ ဘယ်သွားသွား၊ဘာလုပ်လုပ် သူတို့ပဲငွေထုတ်ရှင်းပေးချင်တာ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြတ်တုန်းလပ်တုန်း အချိန်တွေဆိုတာ သူတို့ဆီမှာလည်းရှိတာပဲလေ။ သောက်ရယ်စားရယ်၊ သွားရယ်လာရယ်နဲ့ ကိုယ့်အသုံးစရိတ်နဲ့ ကိုယ်ပါပဲ။ ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ပြောရင် မိန်းကလေးတွေဘက်က အထင်သေးမှာကိုသူတို့စိုးရိမ်တာကြောင့် ထုတ်မပြောချင်ကြတာပါ။ ရည်စားမရှိတဲ့ ကောင်လေးတွေဆိုလည်း ကိုယ့်လစာနဲ့ကိုယ်တောင် မလောက်လို့ ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာ ကြိုက်မိတဲ့ကောင်မလေးရှိရင်တောင် ငွေကြောင့် နောက်ဆုတ်သွားကြတာတွေရှိတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတာပါပဲ..
ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့အရပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူတွေဝေဖန်မှာကို စိုးရိမ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့တွဲတဲ့ မိန်းကလေး သူ့ထက်ရှည်နေရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ ဒီလိုဆို သူတို့အတွက် သိမ်ငယ်သလိုခံစားရစေတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ထက်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေရှာရင်း single ဖြစ်နေကြတာတွေလည်း အများကြီးပါတဲ့…
တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တယ်
ယောက်ျားဆိုတာမျိုးက အခြားမိန်းကလေးတွေကို သူတို့လိုက်ကြည့်ချင် ကြည့်မိမယ်။ သူတို့ကောင်မလေးကို အခြားကောင်လေးတွေ လာကြည့်ရင် မကြိုက်ဘူးတဲ့။ အဲ့လိုဆို ကောင်မလေးကို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်ကြတယ်။ အခြားယောက်ျားလေးနဲ့ သူ့ကောင်မလေးပျော်နေတာမြင်ရင် ဒါမှမဟုတ် အလုပ်သဘောအရ သိသွားတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတာမျိုးမြင်ရင် သဝန်တိုတတ်ကြပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ဆိုးဝါးတဲ့အတိတ်တွေက အနာဂတ်ထိပါ လိုက်ပါနှောင့်ယှက်တတ်ကြပါတယ်။ အရင်တစ်ယောက်နဲ့ ဘာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါစေ။ ဒီကိစ္စဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ထဲကို ခြောက်လန့်နေတတ်တယ်။ ဒီအတိတ်ကိစ္စကြောင့် လက်ရှိ ချစ်သူနဲ့ ဝေးရမှာကို စိုးရိမ်တာပါ။ အတိတ်က အတိတ်ပဲ .. အခုလက်ရှိအချိန်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် အမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ သူ့မိန်းကလေး လက်မခံပေးနိုင်မှာကို စိုးရိမ်နေမှုသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက် ငိုတာကို မင်းတွေ့ဖူးလား ? ၅ဝရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားတွေသာ ငိုချင်စိတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လို့ မျက်ရည်ကျပါလိမ့်မယ်။ အများစုကတော့ သူတို့စိတ်ခံစားချက်ကို အပြင်မှာထုတ်မပြကြဘူး။ ကောင်မလေးရှေ့မှာဆို ဒီလိုထုတ်ပြရမှာကို ပိုတောင်ရှက်သေးတယ်။ ယောက်ျားလေးလည်း သွေးနဲ့သားနဲ့ ငိုမှာပါပဲ။ လူတွေမသိတဲ့ နောက်ကွယ်မှာသာ သူတို့မျက်ရည်ကျချင် ကျတာပါ။ ငယ်စဉ်တည်းက ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး မငိုနဲ့စမ်းလို့ လူကြီးတွေ ဆုံးမကြတာ ကြားဖူးမှာပေါ့။
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားအလုပ်မှာ တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင် အထင်သေးခံရမှာကို စိုးရိမ်တယ်။ မိန်းမက အားကိုးတကြီးနဲ့ ” ဒါလေး ပြင်ပေးပါဦး ယောက်ျားရေ” လို့ ပြောလာတဲ့အခါ ကိုယ်မကိုယ်တွယ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေရင် အကူညီမပေးနိုင်မှာကို ကြောက်ကြတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ယောက်ျားဆို မိန်းကလေးတွေက သဘောကျကြတယ်လေ။ သူတို့အပေါ် သဘောကျမှုလျော့နည်းသွားမှာစိုးပြီး ယောက်ျားမပီသဘူးလို့ ထင်သွားမှာကို စိုးရိမ်တာပါ။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်။ ကိုယ်တောင်မှ လိုအပ်ချက်ရှိနေရင်
သူ့ကိုလည်း အပြစ်မြင်နေလို့ ဘယ်ရမလဲ။ နားလည်မှုဆိုတာ သူ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်မြင်ပေးတာမျိုးပေါ့…
March 18, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ဆို မိန်းကလေးတွေဟာ မှီခိုအားထားစရာကောင်းပြီး လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရလို့ပါပဲ။ ဒီအချက်ကြောင့် ထိုယောက်ျားတွေဆီက ရုန်းမထွက်ချင်ဘူး။ အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေသိနေလို့ပေါ့။ သူတို့ကတည်ငြိမ်တယ်၊ ရင့်ကျက်တယ်။ ပေးပြီးသား ကတိကိုလည်း တည်မြဲစေတယ်။ အခုခေတ်လူငယ်ကောင်လေးတွေလို ပေါ့တီးပေါ့ပျက်မနိုင်ဘူး။ဒီတော့ပိုပြီး သူတို့ကိုမိန်းကလေးတွေ သဘောကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့
ခုခေတ်မှာလို အရူးလုပ်တာတို့၊ စိတ်ကစားတာတို့လို ကလေးဆန်တဲ့အလုပ်တွေသူတို့မလုပ်တော့ဘူး။ အသက်ရွယ်အရ တည်ငြိမ်၊ ရင့်ကျက်လာပြီ။ သင့်တော်မယ့် မိန်းကလေးနဲ့အတည်တကျလက်တွဲဖို့သာ သူတို့စဉ်းစားတော့တယ်။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ လူကြီးတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့အမူရာတွေကြောင့် သင်စိတ်လှုပ်ရှားရဦးမှာပါ။
ယောက်ျားလေးတွေ လှတာကြိုက်သလို၊ မိန်းကလေးတွေလည်း ချောမောတဲ့ယောက်ျားလေးဆို သဘောကျပါတယ်။ အရမ်းချောမောတာထက် မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တာက တည်ငြိမ်မှုပါပဲ။ အရမ်းဂနာမငြိမ်ဖြစ်လွန်းတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို မိန်းကလေးတွေသဘောမကျဘူး။
ကြိုက်မိသွားရင်တောင် ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် သူတို့ရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မချောရင်တောင် တည်ငြိမ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပဲ မိန်းကလေးတွေနှစ်သက်တယ်။
ဒီအကြောင်းပြချက်ပဲ မိန်းကလေးတွေသဘောကျတာပေါ့။ တစ်ခုခုဆို ရှေ့ကလမ်းပြနိုင်တယ်။ ကူညီပေးနိုင်တယ်၊ လဲကျသွားရင် ပြန်ထဖို့ ဘေးနားက အဆက်မပြတ်အားပေးနေတယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ထက် အတွေ့အကြုံတွေပိုများတော့ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေး ငယ်ငယ်လှလှချောချောလေးတွေကို လူတိုင်းသဘောကျပေမယ့် သူတို့ကတော့ အပေါ်ယံအလှတရားတွေထက် စိတ်ဓာတ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုသာကြည့်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ စိတ်သဘောထား၊ စရိုက်အနေထားတူညီရင် ဒီမိန်းကလေးနဲ့တင် ပြည့်စုံပါပြီ။ ငယ်ငယ်ကသာ ရူးမိုက်ပြီး ရည်းစားတွေများရင်များခဲ့ဖူးမယ်။ အခုချိန်မှာတော့ တကယ်သဘောကျတဲ့မိန်းကလေးနဲ့သာလျှင် တည်ငြိမ်စွာ သူနေလိုတော့တယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေဆို မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း သြဇာ အာဏာညောင်းတဲ့လူတွေအဖြစ် စိုးမိုးထားပါတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ရှောင်မပြေးသွားဘဲ တာဝန်ယူဖြေရှင်းတယ်။ သင့်ကို အမြဲကာကွယ်ပေးဖို့ အသင့်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မိန်းကလေးတွေနှလုံးသား အရည်ပျော်ရတာပေါ့။
အသက်ကြီးတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တစ်ခုမှာ အခြေတစ်ကျရှိပြီး ငွေရေးကြေးရေးကလည်း တည်မြဲလာပြီ။ ဒီအချက်ကိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးက ငြင်းနိုင်မှာလဲ ? တကယ်သဘောကျလို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့မိန်းကလေးကို ဘယ်တော့မှလည်းလမ်းခွဲဖို့မစဉ်းစားဘူး။
March 16, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဟုတ်လှပြီထင်နေပေမယ့် သူများရဲ့လှည့်စားခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့
အချိန်တွေရှိခဲ့ဖူးမှာပါ။ ခဏတာ စိတ်ကစားတဲ့လူတွေဆီမှာ သာယာမိနေပြီလား။
သူ့ရဲ့အပြောဆို အပြုမူတွေအောက်မှာ ကျရှုံးခဲ့ပြီးမှ သူပေးခဲ့တာတွေဟာ အစစ်မှန်မဟုတ်မှန်း
သူတို့ မင်းကိုလာပြီး လှည့်ဖြားတာဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့
ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်နှစ်ပြီး မယုံကြည်မိဖို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့
စိတ်ကစားတတ်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်ထဲမပါတဲ့ အပြောချိုတွေ ၊ အပြုမူတွေ၊ မထင်မှတ်ထားတဲ့
အချိန်တွေမှာ မင်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားအောင် ပေါ်လာတတ်ပြီး အချို့ အချိန်တွေမှာလည်း
အဓိကကတော့ သူက မင်းကိုလိုသုံးအဖြစ် အသုံးချနေခဲ့တာပါပဲ။ သူလိုတဲ့အချိန် မင်းဆီရောက်လာ
မယ်။ မလိုတော့ရင်တော့ ဘာမှကိုအဖက်မလုပ်တာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုလူအပေါ် ချစ်မိနေပြီဆိုရင်
မင်းတစ်သက်လုံး ၀မ်းနည်းပူဆွေးနေရတော့မယ်။ သူဟာ ကိုယ့်ကို အချိန်ခဏတာအတွက် အသုံးချ
နေတာမျိုး အဖြစ်မခံပါနဲ့။ သူဘယ်အချိန်ရောက်လာပါစေ.. မင်းဘက်က အမြဲနွေးထွေးပေးခဲ့ပေမယ့်
မင်းလိုအပ်နေချိန်ကြ သူမှ မရှိတာ။ ဒါကို အချစ်လို့ မသတ်မှတ်သင့်တော့ဘူးလေ။
ဒါကို အချစ်လို့ မခေါ်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုလိုသုံးအဖြစ် ခဏတာအသုံးချနေသူဆီကနေ အမြန်လွတ်မြောက်ပါစေနော်…
ချိုင်းမဲ နေလို့လက်ပြတ်ဝတ်ရမှာ ရှက်နေတတ်ကြတဲ့သူ တွေရှိကြမှာပါနော်။ လက်မောင်းလေးလှ နေပြီး လက်ပြတ်မိုက်မိုက် လေးေ တွနဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကြိုး လေးေ တွနဲ့လန်းချင်ပင်မဲ့ ချိုင်းမဲ ကြီးကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းနေရမှာပါ။ ဒီလိုိမုန်းတီးစရာ ကိစ္စကြီးကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အ တွက် ချိုင်းမဲခြင်း ပြဿနာကို ဘယ်လို တွေ ကုသမလဲဆိုတာ အနည်းငယ်လေး Sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်…
(၁) ချိုင်းကို အ မွှေးမျှင်ရှင်းအော င်ဦးဆုံးလုပ်ပါ။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ခြင်းက ချိုင်းသား အသားရည်ကို ပိုပြီး သန့်စင်လှပဖို့ထောက်ကူပြုစေပါတယ်။
(၂) ရှားစောင်းလက်ပက်အနှစ်နဲ့ဆားကို ရောပြီး အ မွှေးနှုတ်ထားတဲ့ချိုင်းသားအသားရည်ကို ညင်သာ စွာပွက်တိုက်ပေးပါ( ရေမချိုးခင် ၂၀မိနစ်အလို လောက်မှာပွက်တိုက်သင့်ပါတယ်)
(၃) နောက်တစ်မျိုးက တော့ မုန့်ဖုတ် ဆော်ဒါပါ။ မုန့် ဖုတ် ဆော်ဒါကို ပျစ်ပျစ် လေး ဖျော်ပြီး ချိုင်းကို အသားထိစိမ့်ဝင်အောင်လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်အောင် လောက်ထိထားပြီးမှ ရေ ဆေးချ ပေးပါ။
ဒီလို နည်းလမ်း လေးတွေလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သင်တို့ဝတ်ချင်တဲ့ လက်ပြတ်ကို ဘယ် နေရာ ရောက်ရောက် အေး ဆေးေ လးဝတ်နိုင်ပါပြီနော်။ ချိုင်းမဲလို့ လက် မြှောက်ရပြုရမှာကြောက် နေတာေ တွကိုလည်း အေး ဆေး ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ…
ခြိုငျးမဲ နလေို့လကျပွတျဝတျရမှာ ရှကျနတေတျကွတဲ့သူ တှရှေိကွမှာပါနျော။ လကျမောငျးလေးလှ နပွေီး လကျပွတျမိုကျမိုကျ လေးေ တှနဲ့ကွိုးတဈခြောငျးကွိုး လေးေ တှနဲ့လနျးခငျြပငျမဲ့ ခြိုငျးမဲ ကွီးကွောငျ့ စိတျပငျပနျးနရေမှာပါ။ ဒီလိုမုနျးတီးစရာ ကိစ်စကွီးကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ အ တှကျ ခြိုငျးမဲခွငျး ပွဿနာကို ဘယျလို တှေ ကုသမလဲဆိုတာ အနညျးငယျလေး Sharing လုပျပေးခငျြပါတယျ…
(၁) ခြိုငျးကို အ မှေးမြှငျရှငျးအော ငျဦးဆုံးလုပျပါ။ ဒီလို လုပျဆောငျခွငျးက ခြိုငျးသား အသားရညျကို ပိုပွီး သနျ့စငျလှပဖို့ထောကျကူပွုစပေါတယျ။
(၂) ရှားစောငျးလကျပကျအနှဈနဲ့ဆားကို ရောပွီး အ မှေးနှုတျထားတဲ့ခြိုငျးသားအသားရညျကို ညငျသာ စှာပှကျတိုကျပေးပါ( ရမေခြိုးခငျ ၂ဝမိနဈအလို လောကျမှာပှကျတိုကျသငျ့ပါတယျ)
(၃) နောကျတဈမြိုးက တော့ မုနျ့ဖုတျ ဆျောဒါပါ။ မုနျ့ ဖုတျ ဆျောဒါကို ပဈြပဈြ လေး ဖြျောပွီး ခြိုငျးကို အသားထိစိမျ့ဝငျအောငျလိမျးပေးပါ။ ခွောကျအောငျ လောကျထိထားပွီးမှ ရေ ဆေးခြ ပေးပါ။
ဒီလို နညျးလမျး လေးတှေလုပျကွညျ့မယျဆိုရငျ သငျတို့ဝတျခငျြတဲ့ လကျပွတျကို ဘယျ နရော ရောကျရောကျ အေး ဆေးေ လးဝတျနိုငျပါပွီနျော။ ခြိုငျးမဲလို့ လကျ မွှောကျရပွုရမှာကွောကျ နတောေ တှကိုလညျး အေး ဆေး ဖွရှေငျးနိုငျမှာပါ…
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်လို့တွဲခဲ့ကြပေမဲ့ လူနှစ်ယောက်ကမွေးဖွားလာတဲ့ လူနှစ်ယောက်ဟာ အမြဲအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ RS တစ်ခုဖြစ်စေဖို့နီးစပ်တဲ့ အချက်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွဲနေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ချစ်တဲ့စိတ် မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကလွဲပြီး တစ်ခြားမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားတွေမထားမိပါစေနဲ့။ ကိုယ့်အတွက်ပဲထားတာဖြစ်ဖြစ် သူ့အတွက်ပဲထားတာဖြစ်ဖြစ် မျှော်လင့်ချက်တွေ အကြီးကြီးထားတဲ့အခါ အထားခံရတဲ့သူမှာလည်း ၀န်ပိသလို၊ မျှော်လင့်တဲ့သူဟာလည်း ဖြစ်လာရင်ကောင်းပင်မဲ့ အဖြစ်လာရင် မျှော်လင့်ချက်ကြီးသလောက်နာကျင်ရပါတယ်။ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်အေးချမ်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ချစ်တာချစ်ပါ အချစ်မလွန်ပါစေနဲ့။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ချစ်တဲ့စိတ်များလာတဲ့အခါ စိုးရိမ်ပူပန်းမှုတွေ အားမလိုအားမရမှုတွေများလာပြီး ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တောင်မေ့ကာသူ့အတွက်ဆိုတာမျိုနဲ့တစ်ချိန်လုံးတွေးပူနေတက်ကြတာမျိုးရှိတက်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်နယ်ကျွံပြီး တစ်ယောက်မရှိရင် ဘ၀ကအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့တာမျိုး ဒီတစ်ယောက်ကိုမှ မပိုင်ဆိုင်ရရင် ကိုယ့်ဘ၀ စုတ်ပြတ်သတ်သွားမဲ့ အကွက်မျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုမချစ်ပဲ တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်က အေးချမ်းမှုမရှိပူလောင်တာမျိုးခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူရည်းစားရဲ့အလို ဆန္ဒကြောင့်ရယ် ဘာကြောင့်ရယ် မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်သူရှိရှိ မရှိရှိ ကိုယ်လျှောက်ရမဲ့လမ်းကိုယ့်ယုံကြည်ရာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းကို မတုံ့ဆိုင်းပါနဲ့။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရေရှည်ချစ်လာဖို့ဆိုတာ အချစ်လည်းလိုသလို ယုံကြည်မှုလေးစားမှုလည်းလိုပါတယ်။ ကိုယ်ကအရမ်းမအောင်မြင်ရင်တောင်ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ် သွားနေတဲ့သူပုံစံမျိုးပဲ ကိုယ့်ချစ်သူမြင်ပါစေ။ ဒါမှလည်းတစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် ပိုလေးစားတန်ဖိုးထားတက်လာပြီး စိတ်ချမ်းသာပျေ်ာရွှင်ရမှာပါ။
နှစ်ဦးသာတွေ့ဆုံချိန်မှာသူဟာ ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးရှိကြောင်း သူသိအောင်နေပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတွေကိုတောင် အေးချမ်းတဲ့ပျော်စရာ အခြေနေဖြစ်အောင်ပြောဆိုပါ။ လူဆိုတာ မမြဲရန်ဖြစ်ပြီး ပူလောင်နေတဲ့နေရာထက် ကိုယ့်အတွက်အေးချမ်းပြီးစိတ်ချမ်းသာရတဲ့နေရာကိုခုံမင်တက်ကြတာသဘာဝပါပဲ။ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ RS တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် တွေ့ဆုံချိန်းတိုင်းကိုအေးချမ်းကြည်နူးရတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေသာဖန်တီးကြပါ။
အတွဲတစ်တွဲမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ယုံကြည်လေးစားတတ်ဖို့က သိပ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ချစ်နေရင်ပြီးတာပဲသူ့ကို ငါလေးစားစရာမလိုဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ လူတိုင်းက တော့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ချီးကျူးစကား၊ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအ ပေါ်ဂုဏ်ပြုတာကိုခံချင်ကြတာကြီးပါပဲ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြလို့တှဲခဲ့ကွပမေဲ့ လူနှဈယောကျကမှေးဖှားလာတဲ့ လူနှဈယောကျဟာ အမွဲအဆငျပွနေမေယျဆိုတာမြိုးကွီးတော့မဖွဈနိုငျပါဘူး။ဆိုတော့ စိတျခမျြးသာစရာကောငျးတဲ့ RS တဈခုဖွဈစဖေို့နီးစပျတဲ့ အခကျြအနညျးငယျကိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…မြှျောလငျ့ခကျြေ တှအမြားကွီးမထားပါနဲ့တဈယောကျနဲ့တဈယောကျတှဲနတေဲ့အခြိနျမှာ တဈယောကျကို တဈယောကျခဈြတဲ့စိတျ မွတျနိုးတဲ့စိတျကလှဲပွီး တဈခွားမြှျောလငျ့ခကျြကွီးကွီးမားမားတှမေထားမိပါစနေဲ့။ ကိုယျ့အတှကျပဲထားတာဖွဈဖွဈ သူ့အတှကျပဲထားတာဖွဈဖွဈ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အကွီးကွီးထားတဲ့အခါ အထားခံရတဲ့သူမှာလညျး ဝနျပိသလို၊ မြှျောလငျ့တဲ့သူဟာလညျး ဖွဈလာရငျကောငျးပငျမဲ့ အဖွဈလာရငျ မြှျောလငျ့ခကျြကွီးသလောကျနာကငျြရပါတယျ။ တဈယောကျပျေါတဈယောကျအေးခမျြးတဲ့မတ်ေတာနဲ့ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ခဈြတတျဖို့လိုပါတယျ။ကနျ့သတျခကျြထားပါခဈြတာခဈြပါ အခဈြမလှနျပါစနေဲ့။ တဈယောကျအပျေါတဈယောကျခဈြတဲ့စိတျမြားလာတဲ့အခါ စိုးရိမျပူပနျးမှုတှေ အားမလိုအားမရမှုတှမြေားလာပွီး ကိုယျ့အတှကျကိုယျတောငျမကေ့ာသူ့အတှကျဆိုတာမြိုနဲ့တဈခြိနျလုံးတှေးပူနတေကျကွတာမြိုးရှိတကျကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခဈြနယျကြှံပွီး တဈယောကျမရှိရငျ ဘဝကအဓိပ်ပါယျမရှိတော့တာမြိုး ဒီတဈယောကျကိုမှ မပိုငျဆိုငျရရငျ ကိုယျ့ဘဝ စုတျပွတျသတျသှားမဲ့ အကှကျမြိုးတှလေုံးဝမလုပျပါနဲ့။ ဒါဟာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပိုမခဈြပဲ တဈယောကျအတှကျ တဈယောကျက အေးခမျြးမှုမရှိပူလောငျတာမြိုးခံစားရလာနိုငျပါတယျ။ကိုယျ့တကျလမျးကို မပိတျပငျမိပါစနေဲ့ခဈြသူရညျးစားရဲ့အလို ဆန်ဒကွောငျ့ရယျ ဘာကွောငျ့ရယျ မဟုတျပဲ ကိုယျ့ဘဝမှာ ဘယျသူရှိရှိ မရှိရှိ ကိုယျလြှောကျရမဲ့လမျးကိုယျ့ယုံကွညျရာလမျးကို လြှောကျလှမျးကို မတုံ့ဆိုငျးပါနဲ့။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ရရှေညျခဈြလာဖို့ဆိုတာ အခဈြလညျးလိုသလို ယုံကွညျမှုလေးစားမှုလညျးလိုပါတယျ။ ကိုယျကအရမျးမအောငျမွငျရငျတောငျကိုယျ့ယုံကွညျမှုနဲ့ကိုယျ ကိုယျ့လမျးကွောငျးနဲ့ကိုယျ သှားနတေဲ့သူပုံစံမြိုးပဲ ကိုယျ့ခဈြသူမွငျပါစေ။ ဒါမှလညျးတဈယောကျပျေါတဈယောကျ ပိုလေးစားတနျဖိုးထားတကျလာပွီး စိတျခမျြးသာပျြောရှငျရမှာပါ။ကွညျနူးသာယာမှုပေးပါနှဈဦးသာတှဆေုံ့ခြိနျမှာသူဟာ ကိုယျ့အတှကျ တနျဖိုးရှိကွောငျး သူသိအောငျနပေါ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးတိုငျတိုငျပငျပငျနဲ့စိတျမကောငျးစရာကိစ်စတှကေိုတောငျ အေးခမျြးတဲ့ပြျောစရာ အခွနေဖွေဈအောငျပွောဆိုပါ။ လူဆိုတာ မမွဲရနျဖွဈပွီး ပူလောငျနတေဲ့နရောထကျ ကိုယျ့အတှကျအေးခမျြးပွီးစိတျခမျြးသာရတဲ့နရောကိုခုံမငျတကျကွတာသဘာဝပါပဲ။ဒါကွောငျ့စိတျခမျြးသာစရာကောငျးတဲ့ RS တဈခုဖွဈဖို့အတှကျ တှဆေုံ့ခြိနျးတိုငျးကိုအေးခမျြးကွညျနူးရတဲ့ ကိစ်စမြိုးတှသောဖနျတီးကွပါ။တဈယောကျကိုတဈယောကျလေးစားပါအတှဲတဈတှဲမှာတဈယောကျကိုတဈယောကျယုံကွညျလေးစားတတျဖို့က သိပျကို လိုအပျပါတယျ။ ခဈြနရေငျပွီးတာပဲသူ့ကို ငါလေးစားစရာမလိုဘူးလို့မထငျပါနဲ့။ လူတိုငျးက တော့ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ခြီးကြူးစကား၊ ကိုယျ့ရဲ့လုပျဆောငျခကျြတှေအ ပျေါဂုဏျပွုတာကိုခံခငျြကွတာကွီးပါပဲ။
ကုလားတန်စီမံကိန်း ထိခိုက်မဲ့အရေးကို ကာကွယ်တားဆီးတဲ့ အနေနဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ စစ်ဆင်ရေး တခုကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ကနေ မတ်လ၂ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အိန္ဒိယကလာတဲ့ သတင်းတွေမှာ မနေ့က ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အဓိကကတော့ ရခိုင့်တပ်မတော် AAနဲ့ KIA ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို နှိမ်နင်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆင် ရေးအတွင်း သူပုန်စခန်း ၁၀ ခုကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ သူပုန်စခန်းတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစ်ဆင်ရေးမှာ အသုံးပြုဖို့ စစ်လက်နက် ကိရိယာတွေကို အိန္ဒိယက မြန်မာဘက်ကို ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ AA အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အိန္ဒိယ မြန်မာနယ်စပ် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့ နယ်စပ်မျဉ်းနားကို ကပ်လာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ စစ်ဆင်ရေး ကာလအတွင်း နယ်စပ်ကို မဖြတ်ခဲ့ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထဲက သူပုန်တွေ အိန္ဒိယ နိုင်ငံထဲ ဖြတ်ကျော်မလာအောင် အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက နာဂလန်းနဲ့ မနီပူရ်း ပြည်နယ်တွေမှာလည်း လုံခြုံရေး စောင့်ကြပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကုလားတန်စီမံကိန်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုလ်ကာတားမြို့ ကနေ ၂ နိုင်ငံနယ်စပ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့အထိ ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းဟာ ဒေါ်လာ ၃၈၄ သန်း ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယဘက်က ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ထားပါတယ်။ လာမယ့်နှစ် ၂၀၂၀ မှာ ဒီစီမံကိန်း စတင် လည်ပတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Credit – VOA Burmese
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရတပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA ကြား လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သောကြာနေ့ နေ့လည်က ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarric က အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တွေကြား တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်သွားနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုအခြေအနေမျိုးမှာ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အင်မတန်စိုးရိမ်နေပါတယ် ဆိုတာပါ။ မြန်မာလုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေကို တိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ ရှုတ်ချပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒုက္ခရောက်သူရတွေနဲ့ သူတို့ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါတယ်။
တပ်မတော်ဖက်က လေကြောင်းကို အသုံးပြုနေတာတွေဟာလည်း အထူးစိုးရိမ်စရာ အနေအထားပါ။ အခုလို အင်အား အဆမတန်သုံး တုန့်ပြန်မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ နိုင်ငံတကာရဲ့  လူသားချင်းဆိုင်ရာ ကူညီမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအောက်မှာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတွေနဲ့ တခြားအရေးပါတဲ့ အထောက်အပံ့တွေရဖို့ နှစ်ဖက်စလုံးဟာ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မယ်။
တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေအုံးမယ် ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့  အခုလက်ရှိ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေတွေဟာ ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
ဒီပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးကိုလည်း အခုပြဿနာကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ ဒီပြဿနာကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုက တဆင့်ပဲ ဖြေရှင်းသွားကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်။”
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ခက်နေရင် …
January 30, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေသောက်ရင် ၊ ပုံမှန်သောက်နေကြ အချိန်ရောက်လာရင် အသွေးထဲ အသားထဲကအလိုလိုတောင့်တနေတဲ့ စိတ်ကို ဖျောက်ဖျက်မရဖြစ်နေပြီလား ? ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အဓိက,ကတော့ စိတ်ပါပဲ။ ပြတ်သားတဲ့စိတ်နဲ့သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးပြီဆိုရင် ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်နာနိုင်အောင်သာ လုပ်ကြပါလေ။
အသေးအဖွဲ့လေးတွေ ပါးစပ်က၀ါးနေဖို့လိုပါတယ်။ စီးကရက် ရှိုက်ခြင်းကို အစားထိုး
နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ လေ့လာချက်များအရ ရေအေးကို ပိုက်နဲ့ နည်းနည်းချင်းစီ စုပ်သောက်ခြင်းက Dopamine ထွက်စေပါတယ်။ Dopamine ဆိုတာ ”မကောင်းတဲ့စိတ်”တွေကိုလျော့ကျစေတာပါ။ အစားနည်းနည်း ဝါးစားခြင်းကလည်း မီးခိုးငွေ့အလွမ်းကိုလျော့စေပါတယ်။
ဆေးလိပ်မသောက်ရင် ရရှိနိုင်မယ့် ကောင်းကျိုးတွေကိုစဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်
လည်းနိုင်မယ် ၊ ငွေကုန်လည်း သက်သာမယ်၊ အစားသောက် အရသာရှိစွာ
စားနိုင်ခြင်းနဲ့ အမောခံနိုင်ခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရမှာပါ။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရင် ခံတွင်းနံ့လေးကောင်းလာမယ်။ လူကြားထဲ ပါးစပ်အကျယ်ကြီးဟ
ပြီး အော်ရယ်၊ အော်ပြောနိုင်မယ်။ ချစ်စရာ ခံတွင်းရနံ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်။
အရက်သောက်ရင် ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို အားပေးပါတယ်။ အကြောင်းပြ
ချက်များစွာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရက်ဆိုတာကလည်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်
လူရှေ့သူရှေ့ ၊ အလုပ်နဲ့ လူကြီးသူမတွေရှေ့မှာ မသောက်မိအောင် ကိုယ့်ဘာသာ
ဘာကြောင့် ငါဒါကိုဖြတ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ကိုယ်စီရှိကြမှာပါ။
ချစ်သူကိုသတိရသလို ဒါလေးကိုလည်းအမြဲတမ်း အဆက်မပြတ်သတိရနေဖို့လိုပါတယ်။ လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါစေ။ စိတ်ခံစားမှုကောင်းနေပြီး တက်ကြွတဲ့စိတ်ရှိနေခြင်းက ဟိုဟာမလုပ်ရ မနေနိုင် ၊ ဒီဟာမလုပ်ရမနေနိုင်တာတွေကို ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့လုံးနေလို့ တစ်လိပ်မသောက်ဖြစ်ရင် အဲ့ဒီရက်လေးကို ပြက္ခဒိန်မှာ သေချာမှတ်ထားပါ။ နောက်ထပ်ရက်တွေ တိုးပွားချင်စိတ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အပေါင်းသင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကိုအောင်မြင်စွာအပြတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ကိုယ့်စီမှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ အပေါင်းသင်းတွေထဲမှာ ဒီလူနဲ့တွေ့လို့ ပြန်သောက်မိနေတယ်ဆိုရင် သူ့ကိုရှောင်ပါ။
ကော်ဖီသောက်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ကော်ဖီလျော့ဖို့လိုပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ကော်ဖီသောက်ပြီးရင် နောက်ထပ်ထပ်မသောက်မိအောင်နေပါ။ ကော်ဖီရဲ့ ကဖင်းဓာတ်တွေက မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီသောက်တာကိုလျော့ချပါ။
စိတ်ဆိုး ၊ စိတ်အလိုမကျ ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် အခြားနည်းနဲ့ စိတ်ကိုဖြေဖျောက်ပါ။
တော့ ပြေးလမ်းပေါ်မှာ စိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။ ၁၄ရက်လောက် မသောက်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုရင် တော်တော်ဟန်ကျနေပြီပြောရမယ်။မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့စားသောက်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများများလုပ်ပါ။ ဆေးလိပ်ပျက်ခြင်း ၊ မပျက်ခြင်းသည် ကြားမှာပါးလွှာလွန်းလှတယ်။
“တစ်လိပ်” ပဲခြားပါတယ်။ မီးခြစ်တစ်ခြစ်ပဲ ခြားပါတယ်။ ပြန်စသောက်မိရင် ပြန်ဖြတ်ပါ။
စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံးနဲ့ စိတ်အထိခိုက်အလွယ်ဆုံး ရာသီဖွား (၅) ဦး
January 29, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
သင်ဟာ ၀မ်းသာစရာသတင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ၀မ်းနည်းစရာသတင်းတစ်ခုကြားလိုက်တာနဲ့ ပျော်လို့ထခုန်တာမျိုး၊ သူငယ်ချင်းကို ချက်ချင်းပဲ ကိုယ် ၀မ်းနည်းနေတာကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်တာမျိုး ချက်ချင်းလုပ်တတ်သူဆိုရင် သင်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သူလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တာ မကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီလို လူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုပျော်ရွှင်အောင်ထားရမလဲဆိုတာ သိကြတာမို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်တစ်ခုလို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာတွေက တစ်ဖက်လူအတွက် စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေတော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်လှုပ်ရှားတာ၊ စိတ်ထိခိုက်တာတွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခြေအနေချင်း မတူညီပြန်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်ရာသီခွင်တွေက စိတ်အလှုပ်ရှားဆုံး၊ စိတ်အထိခိုက်အလွယ်ဆုံးနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ သူတို့ စိတ်ခံစားလွယ်တတ်ကြသလဲ ကြည့်ရအောင်။၁။ Aries – မိဿ ရာသီဖွား (မတ်လ ၂၁ ရက် – ဧပြီလ ၁၉ ရက်) ဒီရာသီဖွားကတော့ သူ့ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အချစ်နဲ့ဖန်တီးတည်ဆောက်ချင်တာပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့အချစ်ရေးကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပြီး သူ့လိုပဲ သူ့ဘေးနားကလူတွေ တန်ဖိုးထားတာမျိုး လိုချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ ဘယ်အရာကို ပြောပြော စိတ်အားထက်သန်စွာပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပြောဆိုတတ်ခြင်းတွေကြောင့်လည်း သူတို့ဟာ အခြားသူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုတာ အမြဲခံရတတ်ပါတယ်။ သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ သူတို့ဟာ သူတို့ မကျေမနပ်ဖြစ်ဘူး၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင် တစ်နေရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီး တခြားသူက ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင် လာလုပ်တာမျိုးကို စောင့်မနေတတ်ပါဘူး။ သူတို့ စိတ်ထဲဖြစ်လာသမျှကို ပြောဆိုနေတတ်ပြီး အခြေအနေမတည်ငြိမ်သရွေ့ စိတ်တွေတို၊ စိတ်တွေလှုပ်ရှားတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိဿ ရာသီဖွားတွေ ဒေါသထွက် ရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ် လို့ ပြောကြတာပါ။၂။ Cancer – ကရကဋ် ရာသီဖွား ( ဇွန်လ ၂၁ ရက် – ဇူလိုင် ၂၂ ရက် )ဒီရာသီဖွားတွေကတော့ သူတို့စိတ်ခံစားချက်တွေကို သူတို့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခုရရှိဖို့ အသုံးချက်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ဆတ်ဆတ်ထိမခံတတ်တဲ့ သဘောရှိတဲ့ ဒီရာသီဖွားတွေဟာ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားမှာဆိုရင် သိက္ခာရှိရှိ၊ ဂုဏ်ရှိရှိ ဖြစ်ချင်တတ်ပါတယ်။ ဒီရာသီဖွားတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ တစ်ဖက်လူကို ဘယ်လိုစိတ်ကျေနပ် အောင်ပြောဆိုရမလဲ၊ စိတ်သက်သာရာရအောင် ပြောပေးရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကရကဋ်ရာသီဖွားတွေဟာ သူတို့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားစိတ်ထိခိုက်လွယ်ကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်လှုပ်ရှား၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်လူနာကျင်သွားအောင် ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ သူတို့စိတ်အခြေအနေ ပြန်အဆင်ပြေစေတဲ့သူတွေကတော့ သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။၃။ Virgo – ကန်ရာသီဖွား ( သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် – စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် )ကန်ရာသီဖွားတွေဟာ သူတို့ဘာသာသူတို့ သိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရှက်သလိုလို ကြေက်သလိုလို ဖြစ်နေတတ်တဲ့ ဒီရာသီဖွားတွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်၊ ဒေါသလည်း ဖြစ်လွယ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့စိတ်ထဲ ဘယ်လောက်တောင် ပူလောင်နေပါစေ လူတွေရှေ့မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့စီစဉ်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင် စိတ်လှုပ်ရှားစိတ်ထိခိုက်တတ်ဆုံး လူတွေပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေ၊ သူတို့မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေပေါ် အားလုံးပုံအပ်ထားတာ များတာကြောင့် တစ်ခုခု မှားသွားတာနဲ့ ပေါက်ကွဲလွယ်တတ်ပါတယ်။၄။Scorpio – ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား ( အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် – နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် )ဒီရာသီဖွားတွေဟာ တစ်ခုခုဆို စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ သေချာလုပ်ဆောင်တတ်သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ခံစားချက်တွေ အရမ်းများလာပြီဆိုရင်တော့ ဒါကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးမနေတတ်ပါဘူး။ ကောင်းတာဖြစ်စေ၊ ဆိုးတာဖြစ်စေ သူတို့ဟာ သင့်ကို သူခံစားနေရတာတွေ ဖွင့်ဟဖို့ ဘယ်တော့မှ တွန့်ဆုတ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုခံစားရတယ်ဆိုတာ သေချာပြောပြပါလိမ့်မယ်။ သူုတို့စိတ်ထဲ ခံစားရတာတွေ ၊ နာကျင်တာတွေ ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်း ခဏထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ သိရအောင် သူနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး အတူရှိပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။၅။ Sagittarius – ဓနုရာသီဖွား ( နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက် – ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် )ဓနုရာသီဖွားတွေကတော့ ဘ၀ကို အကောင်းမြင်တတ်တာများပြီး ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတော်တော်များများကို သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူတွေကို အမြဲဝေမျှပြောဆိုတတ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ဆောင်တတ်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရာသီဖွားတွေဟာ သူတို့အပေါ် မကောင်းဘူးလို့ ထင်တဲ့သူတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်ပေါင်းတာမျိုး မလုပ်သလို တစ်သက်လုံး အကောင်းမမြင်တတ်တော့ပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ သူ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့် လူတွေက သူ့ကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့လူအဖြစ် မြင်တာမျိုးခံရတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာ ကောင်းရာကနေ ချက်ချင်း ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ၀မ်းနည်းသလို၊ နာကျည်းသလို ခံစားနေရသလိုမျိုး ပြောင်းလဲသွားတတ်တာလည်း ရှိတာကြောင့် သူတို့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်လာပြီဆိုရင် သူ ကြိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။Ref:yourtango
12… 259 Next →
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဓမ္မတာ နောက်ကျရခြင်း အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
ညမအိပ်မီ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးခြင်းကြောင့် မျက်စိကင်ဆာဝေဒနာ ခံစားသွားရတဲ့ အမျိုးသား
ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် မိန်းကလေးတိုင်းမဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့အချက် ၅ချက်